Muqdisho: Ciidamada amaanka oo xiray 17 qof una dhacay suuq hubka lagu iibiyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Ciidamada amaanka oo xiray 17 qof una dhacay suuq hubka lagu iibiyo
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgallo dad lagu qabtay oo ciidamada amnigu maalmihii la soo dhaafay ka fuliyeen qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga, Ibraahim Isaaq Yarow oo xalay warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in howlgallada oo lagu sugayey ammaanka laga fuliyey xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan, Dharkeenley iyo Kaaraan, kuwaas oo lagu soo qabtay 17 qof oo ka ganacsanayey hub iyo dareeska ciidamada.
Wasiir ku xigeenka ayaa intaas ku daray in la maxkamadayn doono eedeysaneyaasha, howlgalladuna ay soconayaan inta laga sugayo amniga caasimadda.
Ibraahim Isaaq ayaa dadka ka ganacsada hubka iyo dharka ciidamada ugu baaqay inay ka waantoobaan, wuxuuna ka codsaday dadweynaha Muqdisho inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda ammaanka.
Dhanka kale, ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa howlgalo ka fuliyay Suuq lagu iibiyo Hubka sharci darada ah ee ku yaalla xaafadda Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada ayaa gudaha u galay Suuqa hubka lagu iibiyo ee ku yaala isgoyska Zoobe ee degmada Hodan, halkaasoo ay ka soo qab qabteen qaar ka mid ah ganacsatada iyo hubkii ay iibinayeen.
Ciidamada dowladda ayaa ganacsatadii iyo hubkoodiiba, waxayna ula dhaqaaqeen xarunta hay’adda nabad suggidda ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa weli ka jira meelo si qarsoodi ah loogu iibiyo hubka, iyadoo ciidamada dowladda horay loogu eedeeyey iney hubka iibsadaan.
Alshabaab oo Galgaduud kusoo bandhigay meydadka askar Itoobiyaan ah (Sawirro)
Alshabaab oo xalay weeraro kala gedisan ku qaaday Mahadaay iyo Buulobarde